आमाकी एक्ली सहारा - Muldhar Post
आमाकी एक्ली सहारा
मूलधारपाेष्ट २०७६, २० आश्विन सोमबार 497 पटक हेरिएको
आफूलाई ‘कलाकार’ भन्न रुचाउने नेपालगन्जकी रिया श्रेष्ठको दैनिक तालिका एकदम ‘टाइट’ छ । सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि ‘म्युजिक भिडियो’सम्म उनको व्यस्तताभित्र पर्छ । आफूलाई एउटै विधामा सीमित राख्न नरुचाउने रिया कलाक्षेत्रमा लागेको आठ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा झन्डै सातवटा फिल्ममा उनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन् । ‘जन्जिर’, ‘बोस’, ‘त्रास’, ‘द रिटर्न हिरो’ चलेका फिल्ममध्ये पर्छन् । जसमा उनलाई नायिकाका रूपमा देख्न सकिन्छ ।
‘काम’ वा ‘पेसा’मा भेदभाव नराख्ने रियाको स्वभाव छ । ‘अफर’ आएको कामलाई ‘गर्दिन“’ भनिहाल्दिनन्, उनी । ‘काम कसरी छाड्नु ?’ शुक्रबार सा“झ कुराकानीमा रियाले भनिन्, ‘यो गर्दिन“, त्यो गर्दिन“ भन्न थाल्यो भने पछि परिन्छ ।’ पर्दामा सित्तैमा खेलिदिने ‘पात्र’का कारण उनले थुप्रै अवसर गुमाएकी पनि छिन् । ‘यो प्रवृत्ति कलाक्षेत्रमा बढिरहेको छ,’ उनी भन्छिन् । फुलपाती सँघारमा रियास“ग युमाश शेर्पाले गरेको सटकट संवाद: कस्तो भूमिका मन पर्छ ?
यो र त्यो भन्ने हुँदैन । कामलाई माया गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम सानो–ठूलो भन्ने हुँदैन । सबै प्रकारको भूमिकास“ग न्याय गर्न सक्नु नै कलाकारिता हो । यही हाम्रो धर्म पनि हो । बढी अफर केमा आउँछ ‘आइटम सङ’कै लागि बढीजसो अफर आउ“छन् । ‘के म तिम्रो होइन ?’, ‘श्री ५ अम्बरे’ र ‘बिरानो माया’मा गरेको ‘आइटम डान्स’ पनि बढी चिनायो ।
आइटममै किन बढी ? म अलि त्यस्तै देखिन्छु । सुहाउने भएर पनि होला । बोल्ड देखिने भएर हो कि ? त्यस्तै हो । म ‘बोल्ड’ नै देखिन्छु । फोटोमा अझ बढी मलाई ‘बोल्ड’ देखिन्छ । भनेपछि बाटो हि“ड्दा चिन्दैनन् ? (अचम्म मान्दै) किन नचिन्नु ? झन् बढीले चिन्छन् । भनेपछि भूमिका पनि बोल्डै मन पर्छ ? त्यस्तै भन्नुप¥यो । तर, अघि नै भनिसकें कि सबै प्रकारको भूमिकाले बढी छुने गर्छ । सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक याद छ ?
फिल्मको ‘आइटम सङ’मा एक लाखसम्म लिएकी छु । त्यसबाहेक म्युजिक भिडियोमा ५० हजारसम्म लिने गरेकी छु ।
यो क्षेत्रमा कसले मौका दिए ? मौनता श्रेष्ठले । उहा“ले नै मलाई ‘बे्रक’ दिनुभएको थियो । अहिले पनि उहा“को साथ पाइरहेकी छु ।
कुनै पनि शोषणको अनुभव ? मेरो सबैस“ग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यो अनुभव छैन । परिवारमा को–को छन् ? बुबाको निधनपछि आमा र ममात्रै । परिवार भन्नु नै हामी दुई । कलाक्षेत्रमा लागेर आमालाई पाल्न सकिरहेकी छु । भनेपछि आमाको एक्ली सहारा ? हो । आमाका लागि म छोरी होइन, छोरा हु“ । एक्ली छोरीले के गर्न सक्छ र भन्ने समाजका लागि छोराका रूपमा जन्मेकी छु ।
परिवारको जिम्मेवारी ठूलो छ ? १२ वर्ष भयो, सबै जिम्मेवारी मैमाथि छ । बुबाको निधनपछि आमाको सहारा म र मेरो सहारा आमा नै हुनुहुन्छ । भर्खरै सकाएको फिल्म ? ‘पायल’ र ‘मेरो आफ्नो’ भन्ने फिल्म भर्खरै सकिएको छ । अफरहरू आइरहेका छन् । सबै भ्याउने प्रयास गर्दै छु । सबैको साथले सफलता मिलिरहेकै छ ।
रातो ड्रेसले रिहानालाइ धोका
प्रियंका कार्कीको पानीमुनि हट